YouTube दृश्यहरू खरीद गर्नुहोस् - YTpals
YouTube दृश्यहरू खरीद गर्नका फाइदाहरू के हुन्?
मानिसहरूलाई तपाईंको भिडियोहरू हेर्न प्रोत्साहित गर्दछ
दृश्यहरूले तपाइँको खोज इञ्जिन श्रेणीकरण बढाउन मद्दत गर्दछ
१००% ग्यारेन्टी डेलिभरी वा तपाइँको पैसा फिर्ता
१००% भिडियो अनफ्रिज गर्न ग्यारेन्टी गरियो यदि स्थिर छ भने
हामी सँधै तपाईलाई अर्डर गरिएको भन्दा बढि वितरण गर्दछौं!
परिणामहरू २--24 घण्टामा देखा पर्ने सुरू हुन्छ
स्प्लिट दृश्य बहु भिडियोहरू मार्फत (प्रति भिडियो न्यूनतम १,००० दृश्यहरू)। १०,००० दृश्यहरू र स्प्लिट १ देखि १० भिडियोहरूमा अर्डर गर्नुहोस्।
२०२२ मा YouTube भ्यूहरू किन्नका लागि प्रमाणित तरिकाहरू
YouTube एक धेरै लोकप्रिय अनलाइन स्ट्रिमिङ साइट हो जहाँ एक अरब भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूले प्रत्येक दिन लाखौं घण्टा सामग्री अपलोड गर्छन्। रचनात्मक सामग्री, ट्यूटोरियलहरू, संगीत भिडियोहरू, 'कसरी मार्गदर्शन गर्ने,' उत्पादन समीक्षाहरूबाट अनबक्सिङ भिडियोहरू सम्म, YouTube सँग मानिसहरूले मन पराउने सामग्रीको प्रभावशाली एर्रे छ।
यो तपाइँको प्रतिभा प्रदर्शन गर्न, जागरूकता फैलाउन, प्रभाव पार्न वा तपाइँको ब्रान्ड को प्रचार गर्न को लागी आदर्श प्लेटफर्म हो। शीर्ष सामग्री स्ट्रिमिङ वेबसाइट हुनुको अलावा, YouTube व्यवसायहरू र पैसा कमाउन खोज्नेहरूका लागि रुचाइएको च्यानल हो। हेराइ, मनपर्ने, र तपाईंसँग भएका सदस्यहरू जस्ता मेट्रिक्समा निर्भर गर्दै, तपाईंले पूंजी उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। लोकप्रिय YouTuber बन्ने धेरै फाइदाहरू मानिसहरूले YouTube भ्यूहरू किन्नुको कारण हो।
यदि तपाइँ 2022 मा तपाइँको YouTube च्यानल सुरु गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हेराइहरू खरिद गर्नाले तपाइँलाई सफल YouTuber बन्नको लागि तपाइँको यात्रालाई तिब्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। जब यो YouTube दृश्यहरू खरीद गर्न आउँछ, सबै साइटहरू वा विक्रेताहरू समान रूपमा सिर्जना हुँदैनन्। तपाईंले खोज्नुहुने नतिजाहरू प्रदान गर्ने भ्यूहरू कसरी खरिद गर्ने भन्ने कुरा जान्नु तपाईंको 2022 YouTube रणनीतिलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण छ।
YouTube भ्यूको रूपमा के गणना हुन्छ?
तपाईंले उत्तम साइट खोज्नु अघि YouTube दृश्यहरू खरीद गर्नुहोस्, दृश्यको रूपमा के गनिन्छ भनेर बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। YouTube ले यी मापदण्डहरूमा निर्भर भ्यूहरू गणना गर्छ:
प्रयोगकर्ताले भिडियो हेर्न जानबूझकर भिडियोमा क्लिक गर्दछ।
प्रयोगकर्ताले कम्तिमा ३० सेकेन्डको भिडियो हेर्छन्।
तपाईंले आफ्नो YouTube भिडियो प्ले गर्दा तपाईंको आफ्नै हेराइहरू गणना हुनेछ, तपाईंले यसलाई एक वा दुई पटक हेर्नुभयो भने मात्र। कृत्रिम रूपमा भ्यू बढाउनको लागि पृष्ठलाई निरन्तर ताजा गर्दा हेराइको रूपमा गणना गरिने छैन।
यदि तपाईंले भिडियो हेरेर 30 सेकेन्डभन्दा बढी समय बिताउनुभयो तर यसलाई छोड्नुभयो भने YouTube ले पनि हेराइ गणना गर्नेछ। ३० सेकेन्डभन्दा कम भिडियो हेर्दा YouTube भ्यूको रूपमा गणना गरिने छैन। 30 सेकेन्डको हेर्ने सीमा महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले प्लेटफर्मलाई भिडियो मुद्रीकरण गर्न सकिन्छ कि भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। 30 सेकेन्ड भन्दा कम भिडियोहरू सामान्यतया मुद्रीकरण गर्न सकिँदैन।
हेराइहरू अद्वितीय नभएकोले, कुनै पनि पुन: भ्रमण र रिप्लेलाई पनि हेराइको रूपमा गणना गरिन्छ। यदि तपाइँ यो मेट्रिक जान्न चाहनुहुन्छ भने YouTube एनालिटिक्स ड्यासबोर्डले अद्वितीय दर्शकहरूलाई प्रदर्शन गर्दछ।
अरूबाट दोहोर्याइएको हेराइलाई एक हदसम्म हेराइको रूपमा मात्र गणना गरिनेछ। YouTube ले हेराइहरू गणना गर्न रोक्ने थ्रेसहोल्ड निर्दिष्ट गर्दैन। YouTube विशेषज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि प्लेटफर्मले प्रति दिन चार वा पाँच भ्यूहरू गणना गर्दछ तर यो संख्या पछि भ्यू गणना अद्यावधिक गर्न रोक्छ। टोलीका सदस्यहरू, साथीहरू, वा परिवारलाई बारम्बार भिडियोहरू हेर्नुले हेराइहरूलाई बढावा दिन्छ भन्ने सोच्नु सामान्य छ, यो नहुन सक्छ।
यदि दृश्यहरू 'कृत्रिम' छन् भने, YouTube सफ्टवेयरले तिनीहरूलाई पत्ता लगाउँछ र तिनीहरूलाई मेटाउँछ। यी हुन् युट्युबका लागि समस्याका संकेतहरू:
लगातार रिफ्रेस गर्दै - यदि एकल प्रयोगकर्ताले संख्याहरू ल्याउन लगातार भिडियोलाई ताजा गर्दैछ भने, यो अतिरिक्त भ्यूहरूको रूपमा गणना गरिने छैन।
भाइरसहरू - नेटवर्क, सर्भर, वा कम्प्युटरलाई हानि गर्न डिजाइन गरिएको मालवेयर।
अटोप्ले - कुनै पनि वेबसाइटमा स्वत: प्ले गर्न सेट गरिएको भिडियोलाई दृश्यको रूपमा गणना गरिने छैन।
स्प्याम टिप्पणीहरू - यदि प्रयोगकर्ताले स्प्याम टिप्पणीहरू छोड्छ भने, YouTube ले उनीहरूको हेराइलाई हेराइको रूपमा गणना गर्दैन।
इम्बेडेड भिडियो - इम्बेडेड भिडियोहरूलाई हेराइको रूपमा गणना गरिन्छ कि छैन भन्ने निर्णय विरोधाभासपूर्ण छ, YouTube ले वेब पृष्ठमा इम्बेड गरिएका र स्वत: प्लेमा सेट गरिएका भिडियोहरू गणना नगर्न सक्छ। यदि इम्बेडेड भिडियो आंशिक रूपमा मात्र लोड हुन्छ, प्रयोगकर्ताले भिडियोलाई धेरै पटक रिफ्रेस गरेर, यी हेराइहरू पनि गणना गरिने छैन। इम्बेडेड भिडियो पूर्ण रूपमा र सफा रूपमा लोड हुनुपर्छ, र दर्शकले जानाजानी YouTube को लागि भिडियोमा क्लिक गरी यसलाई दृश्यको रूपमा गणना गर्नुपर्छ।
हेराइहरू कति पटक अद्यावधिक गरिन्छ?
यद्यपि यो जानकारी YouTube द्वारा प्रकाशित गरिएको छैन, अनुभवी YouTubers लाई थाहा छ कि दृश्यहरू तुरुन्तै अपडेट हुँदैनन्। सामान्यतया, YouTube हेराइहरू सामान्यतया हरेक 24 देखि 48 घण्टामा अद्यावधिक हुन्छन्।
YouTube लाइभ: यी हेराइहरू गणना गर्छन्?
YouTube ले मानिसहरूलाई पूर्व-रेकर्ड गरिएका भिडियोहरू अपलोड गर्न मात्र सक्षम बनाउँदैन तर लाइभ भिडियो सुविधा पनि छ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई वास्तविक समयमा लाइभ स्ट्रिमिङ भिडियोहरू हेर्न अनुमति दिन्छ। लाइभ भ्यूहरू पनि YouTube भ्यूको रूपमा गणना गरिन्छ, पूर्व-रेकर्ड गरिएका भिडियोहरूको हेराइहरू जस्तै। पूर्व-रेकर्ड गरिएका भिडियोहरू जस्तै, प्रयोगकर्ताहरूले लाइभ भिडियो हेराइको संख्या समायोजन गरिनेछ
पृष्ठहरू निरन्तर ताजा गर्नुहोस्।
३० सेकेन्डभन्दा कम समयको भिडियो हेर्नुहोस्।
धेरै यन्त्रहरूमा एकै समयमा एउटै आईपी ठेगाना प्रयोग गर्नुहोस्।
भिडियो हेर्दा विभिन्न विन्डोज खोल्नुहोस्।
कसले YouTube भ्यूहरू किन्न आवश्यक छ?
YouTube हेराइहरू र फलोअरहरू खरिद गर्नाले तपाईंलाई इन्टरनेट व्यक्तित्व बन्ने लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यस बाहेक, विभिन्न पेशाहरूले YouTube भ्यूहरू र फलोअरहरू खरीद गरेर पनि फाइदा लिन सक्छन्, जस्तै:
संगीतकारहरू - संगीत भिडियोहरू YouTube मा सबैभन्दा लोकप्रिय प्रकारको सामग्री हुन्। यदि तपाईं एक संगीतकार हुनुहुन्छ जो संसारमा आफ्नो विशेष प्रतिभा देखाउन चाहनुहुन्छ भने, YouTube भन्दा राम्रो प्लेटफर्म अरू कुनै छैन। तपाईंले हेराइहरूको लागि भुक्तान गर्दा, तपाईंले आफ्नो भिडियोहरूसँग संलग्नता बढाउन र राम्रो एक्सपोजर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंको पहुँच विस्तार गर्न र इन्टरनेट प्रसिद्धि प्राप्त गर्नका लागि थप अवसरहरू खोल्न सक्छ।
SEO विशेषज्ञहरू र सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू - एसईओ विशेषज्ञहरू र सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूले YouTube हेराइहरू र ग्राहक आधार खरिद गरेर धेरै तरिकामा लाभ उठाउन सक्छन्। यसले Google वा YouTube मा उच्च श्रेणीको लागि तिनीहरूको सामग्री रणनीतिहरू परिष्कृत गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
ट्विच स्ट्रिमरहरू - ट्विच मुख्य रूपमा लाइभ भिडियोहरू स्ट्रिमिङमा केन्द्रित छ। यस स्थानमा सफल हुन खोज्नेहरूका लागि, युट्युबमा दर्शक संख्या बढाउनु अर्गानिक दर्शक संख्या बढाउने एउटा सिद्ध तरिका हो।
ब्रान्ड - बढ्दो संख्यामा व्यवसाय र मार्केटरहरूले भिडियो मार्केटिङमा लगानी गरिरहेका छन् जुन मार्केटिङ लगानीमा उच्च प्रतिफल प्रदान गर्न साबित भएको छ। भिडियोहरू ग्राहक संलग्नता बढाउन, ब्रान्ड रिकल बढाउने र रूपान्तरण दरहरू सुधार गर्ने क्षमताका लागि परिचित छन्। वास्तवमा, 70 प्रतिशत भन्दा बढी खरिदकर्ताहरूले YouTube मा यसको बारेमा भिडियो हेरेपछि खरिद गर्छन्। आफ्नो बिक्री र ग्राहक संलग्नता मापन गर्न खोज्ने ब्रान्डहरूले YouTube दृश्यहरूमा लगानी गरेर लाभ उठाउनेछन्।
यी पेशाहरू बाहेक, प्रभावकारीहरू, उत्पादन समीक्षकहरू, हास्य कलाकारहरू, वित्त पेशेवरहरू, र शिक्षकहरूले आफ्नो व्यवसाय बढाउन र YouTube भ्यूहरू खरिद गरेर बलियो इन्टरनेट उपस्थिति स्थापना गर्न सक्छन्।
किन YouTube हेराइ महत्त्वपूर्ण छ
Statista को अनुसार, 1.86 मा विश्वभर YouTube को 2021 बिलियन प्रयोगकर्ताहरू छन्। हरेक दिन अरबौं घण्टा भिडियोहरू सबै उमेर समूहका दर्शकहरूले हेर्छन्। दर्शकहरूले ल्यापटप, मोबाइल, ट्याब्लेट, जडान गरिएको टिभी र डेस्कटपहरू लगायत धेरै यन्त्रहरूमा YouTube भिडियोहरू हेर्छन्। तिनीहरूले YouTube मा बिताएको औसत समय लगभग 41 मिनेट हो।
यूएस जनसंख्याको तीन-चौथाई भन्दा बढी YouTube मा हुक भएकोले, यो प्लेटफर्म मार्केटरहरू, व्यवसायहरू, र व्यक्तिहरू जो आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्न वा लोकप्रिय बन्न चाहन्छन् तिनीहरूको लागि जाने गन्तव्य हो। एक सर्वेक्षण अनुसार, B71B मार्केटरहरूको2प्रतिशत ब्रान्ड जागरूकता बढाउन, फलोअरहरू प्राप्त गर्न र रूपान्तरण दर बढाउन YouTube भिडियोहरू सिर्जना गर्न लगानी गर्दछ। विश्वव्यापी रूपमा, 40 प्रतिशत उपभोक्ताहरूले युट्युबमा यसको बारेमा भिडियो हेरेपछि केहि किनेको बताएका छन्।
दर्शकहरूले YouTube भिडियोहरू हेर्नुको शीर्ष कारणहरू समावेश छन्:
ब्रान्डहरूबाट नयाँ उत्पादनहरू/सेवाहरूमा अद्यावधिकहरू
तपाईं आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न चाहनुहुन्छ, संसारलाई तपाईंसँग भएका सीप र प्रतिभा देखाउन चाहनुहुन्छ, वा YouTube मा पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, तपाईंको भिडियोको व्यापक पहुँच सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
YouTube हेराइहरू खरिद गर्ने शीर्ष कारणहरू
YouTube संलग्नता मेट्रिक्स जस्तै हेराइ, सदस्यता, र लाइकहरूले दर्शकहरूले तपाईंको भिडियोसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्छन् भनेर प्रतिबिम्बित गर्दछ। YouTube हेराइले तपाइँको YouTube भिडियो हेरिएको संख्यालाई जनाउँछ। YouTube हेराइहरू तपाईंको YouTube भिडियोको समग्र लोकप्रियताको महत्त्वपूर्ण सूचकहरू हुन्।
तर, युट्युबमा प्रत्येक मिनेट ५०० घण्टाभन्दा बढी भिडियो सामग्री अपलोड हुने भएकाले दर्शकको ध्यान खिच्न चुनौतीपूर्ण छ।
YouTube हेराइहरू खरिद गर्न यहाँ केही थप कारणहरू छन्:
YouTube र Google मा उच्च श्रेणी - YouTube मा र Google जस्ता खोज इन्जिनहरूमा तपाईंको भिडियोको श्रेणी बढाउनको लागि भ्यूहरू महत्त्वपूर्ण छन्। खोज पृष्ठहरू र YouTube मा एक उच्च श्रेणीले समान सामग्री खोज्नेहरूका लागि तपाईंको भिडियोलाई थप दृश्यात्मक बनाउन मद्दत गर्दछ।
YouTube ले गुगलले जस्तै काम गर्छ। प्रयोगकर्ताहरूले कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गरेर खोजी गर्छन्, र भिडियो परिणामहरू YouTube मा प्रदर्शित हुन्छन्। YouTube एल्गोरिथ्मले कुन-कुन भिडियोहरू देखाइने छन् भन्ने निर्धारण गर्दछ जस्तै सदस्य संख्या, हेराइहरू, लाइकहरू, टिप्पणीहरू, र साझेदारीहरू जस्ता धेरै रैंकिंग कारकहरूको आधारमा। मूलतया, YouTube एल्गोरिथ्मले पहिलो पृष्ठ परिणामहरूमा उच्च श्रेणीमा उच्चतम संलग्नता (हेराइहरू, लाइकहरू, सदस्यहरू) भएका सान्दर्भिक भिडियोहरू खोज्छ। यसको मतलब यो हो कि तपाईंको भिडियोको लागि जति धेरै हेराइहरू छन्, तपाईंको भिडियो खोज परिणामहरूमा उच्च रैंक हुने सम्भावना बढी छ। हेराइहरू बढाउने सबैभन्दा राम्रो रणनीति, विशेष गरी जब तपाईं एक शुरुआती हुनुहुन्छ, दृश्यहरूको लागि भुक्तान गर्नु हो।
थप लाइक प्राप्त गर्नुहोस् - YouTube मा भर्खरै सुरु गर्ने मानिसहरूको सामान्य प्रश्नहरू मध्ये एक लाइक भन्दा हेराइको महत्त्वसँग सम्बन्धित छ। यदि तपाइँ बहस गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाइँ लोकप्रियता र श्रेणी को बढावा गर्न को लागी हेराइहरु किन्न वा मनपर्ने किन्न को लागी, ध्यान दिनुहोस् कि तपाइँ लाई हेराइ बिना मनपर्ने हुन सक्दैन। अर्को शब्दमा, तपाइँका दर्शकहरूले यसलाई मन पराउन सक्षम हुन पहिले भिडियो हेर्नुपर्छ। मार्केटरहरू र YouTubers ले धेरै लाइक र फलोअरहरू प्राप्त गर्न पहिलो चरणको रूपमा YouTube भ्यूहरू खरीद गर्छन्।
ग्राहक आधार निर्माण गर्नुहोस् - तपाईंको भिडियो हेर्नको लागि धेरै मानिसहरू प्राप्त गर्नु तपाईंको ग्राहक आधार निर्माण गर्ने उत्तम तरिका हो। तपाईंको YouTube च्यानल जति धेरै सदस्यहरू छन्, यो YouTube खोज परिणामहरूमा उच्च स्थानमा छ।
तपाईंको भिडियोहरू मोनेटाइज गर्नुहोस् - धेरै YouTubers ले YouTube साझेदारी कार्यक्रम मार्फत राम्रो आम्दानी कमाउँछन्। कार्यक्रममा सामेल हुनको लागि, तपाइँसँग 1,000 सदस्यहरू हुन आवश्यक छ, र तपाइँको भिडियोहरू पछिल्लो बाह्र महिनामा 4,000 घण्टाको लागि हेरिएको हुनुपर्छ। एकचोटि तपाईंको भिडियोहरूमा यी धेरै हेराइहरू र सदस्यहरू भएपछि, तपाईंले YouTube मा उपकरणहरू सक्षम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै:
Google Adsense - गुगल एडसेन्स आफ्नो YouTube भिडियो मा विज्ञापन राखेर पैसा कमाउने एक सरल तरिका हो। गुगलको नेटवर्कले लोकप्रिय YouTube च्यानलहरूमा विज्ञापनहरू राख्न खोज्ने व्यवसायहरू र YouTubersहरूले उनीहरूको च्यानललाई मुद्रीकरण गर्न खोज्नेहरूलाई जडान गर्दछ।
एक अनुमान अनुसार, 20,000 दृश्यहरूले तपाईंलाई प्रति दिन $ 28 देखि $ 47 बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। यसले प्रति महिना $460 देखि $769 र $5,600 देखि $9,353 प्रति वर्ष अनुवाद गर्छ।
माल बिक्री - जब तपाइँ दृश्यहरूको लागि भुक्तान गर्नुहुन्छ, तपाइँ एक YouTube साझेदार बन्न सक्नुहुन्छ जसले तपाइँलाई तपाइँको YouTube खातामा बाह्र व्यापारिक वस्तुहरू बेच्न अनुमति दिन्छ। तपाइँ तपाइँको YouTube च्यानल मा तपाइँको आफ्नै उत्पादनहरु को प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रभावकारी मार्केटिंग - यदि तपाइँको YouTube च्यानल हेराइको एक महत्वपूर्ण संख्या छ भने, यसले व्यवसायहरूलाई संकेत गर्दछ कि तपाइँ खरिद निर्णय गर्न अरूलाई प्रभाव पार्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ। व्यवसायहरूले आफ्ना उत्पादनहरू प्रवर्द्धन गर्न लोकप्रिय YouTubers लाई भुक्तानी गर्छन्।
अर्गानिक भ्युहरू बढाउनुहोस् - युट्युब भ्युहरू खरिद गर्ने मुख्य कारण अर्गानिक भ्यु, लाइक र सब्सक्राइबरहरू बढाउनु हो। जब तपाईं एक शुरुआती हुनुहुन्छ, मुट्ठीभर हेराइहरू र सदस्यहरू हुनुको मतलब तपाईंको भिडियो बेवास्ता गर्न सकिन्छ। मानिसहरूलाई तपाईंको भिडियो हेर्नको लागि धेरै समय र प्रयास लाग्नेछ। धेरैजसो मानिसहरू पहिले नै भाइरल भइसकेका वा हजारौं पटक हेरिएका भिडियोहरू हेर्न इच्छुक हुन्छन्। युट्युब हेराइहरू खरिद गर्नाले तपाईंलाई जैविक दृश्यहरू, लाइकहरू, र सदस्यहरू आकर्षित गर्न आवश्यक गति प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
आफ्नो YouTube रणनीति परिष्कृत गर्नुहोस् - एकचोटि तपाईंले अर्गानिक दृश्यहरूको संख्या बढाउनुभयो भने, तपाईंले आफ्नो YouTube भिडियो रणनीतिलाई परिष्कृत गर्न मेट्रिक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हेराइहरू अनुगमन गरेर, तपाईंले आफ्नो थम्बनेल प्रभावकारी थियो कि छैन, शीर्षक आकर्षक छ, र तपाईंको सामग्री हेर्न योग्य छ कि छैन भनेर राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ।
विश्वसनीयता निर्माण गर्नुहोस् - मानिसहरू अरू धेरैले हेरेका र मन पराउने भिडियोहरू हेर्न रुचाउँछन्। केही भ्यूहरूबाट सुरु गर्नुको सट्टा, YouTube भ्यूहरू खरिद गरेर हेराइहरू बढाउन धेरै सजिलो छ। लोकप्रिय YouTube च्यानलहरू विश्वसनीय र विश्वसनीय मानिन्छन्। विश्वसनीयता स्थापित गर्नको लागि पहिलो चरण YouTube भ्यूहरू खरीद गर्नु हो। जब तपाइँको YouTube च्यानल एक विश्वसनीय एक को रूप मा हेरिन्छ, यो अधिक जैविक दृश्यहरु, लाइक, टिप्पणी, र सदस्यहरु लाई आकर्षित गर्नेछ।
आफ्नो वेबसाइट प्रचार गर्नुहोस् - थप हेराइहरू र सदस्यहरू प्राप्त गर्नु भनेको तपाइँको लक्षित दर्शकहरूलाई तपाइँलाई विश्वास गर्न प्राप्त गर्ने उत्कृष्ट तरिका हो। यदि तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को प्रवर्द्धन गर्न YouTube को लाभ उठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने, YouTube दृश्यहरु किन्न तपाइँलाई यो लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तपाईंको भिडियोमा प्रभावकारी CTA (कल टु एक्शन) बटन र लिङ्क थप्दा तपाईंलाई तपाईंको वेबसाइटमा सदस्यहरूलाई निर्देशित गर्न मद्दत गर्नेछ। सामाजिक मिडिया साझेदारी सक्षम गर्नाले तपाइँको वेबसाइट ट्राफिकलाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ।
विश्वसनीय स्रोतबाट YouTube हेराइहरू खरिद गर्नाले तपाईंले प्रस्ताव गर्ने सामग्रीमा रुचि राख्ने सम्भावना भएका मानिसहरूलाई लक्षित गर्न मद्दत गर्नेछ। यी व्यक्तिहरूले तपाइँको वेबसाइट भ्रमण गर्ने र तपाइँको सेवा वा उत्पादन खरिद गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ, तपाइँको राजस्व बढ्छ।
सबै भन्दा माथि, जब तपाइँ YouTube भ्यूहरू खरीद गर्नुहुन्छ, तपाइँ २०२२ को लागि तपाइँको YouTube रणनीति हासिल गर्ने बाटो छिटो ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाइँको समय पनि खाली गर्नेछ किनकि तपाइँ धेरै सदस्यहरू सङ्कलन गर्न र भिडियो हेराइहरू बढाउनमा धेरै समय र प्रयास खर्च गर्नुहुन्न। उच्च गुणस्तरको सामग्री सिर्जना गर्ने, तपाईंको इन्टरनेट मार्केटिङ रणनीतिहरू परिष्कृत गर्ने र अन्य रचनात्मक पक्षहरू सहित आफ्नो YouTube रणनीति फाइन-ट्यून गर्न तपाईं आफ्नो खाली समयको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
अब जब तपाइँसँग YouTube भ्यूको अर्थ र YouTube भ्यूहरू खरिद गर्ने फाइदाहरू बारे अन्तर्दृष्टिहरू छन्, अर्को चरण भनेको YouTube भ्यूहरू किन्नको लागि सही साइट खोज्नु हो। धेरै साइटहरू (धोखाहरू सहित) YouTube भ्यूहरू र सदस्यहरू प्रदान गर्दै, यो एक प्रामाणिक साइट फेला पार्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
तपाईंको २०२२ को YouTube रणनीतिसँग मिल्दोजुल्दो YouTube भ्यूहरू किन्नका लागि यहाँ प्रमाणित चरणहरू छन्।
२०२२ मा YouTube भ्यूहरू खरिद गर्ने सिद्ध तरिकाहरू
YouTube भ्युज बिक्रेताको खोजी गर्नु समय-उपभोग र चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ जब तपाईं के खोज्ने भनेर निश्चित हुनुहुन्न। आदर्श प्रदायकले प्रिमियम गुणस्तर सेवाहरू, किफायती प्याकेजहरू, अनुकूलन, फिर्ता नीति सुरक्षा, रिफिल ग्यारेन्टी, र व्यापक ग्राहक समर्थन प्रदान गर्दछ।
YouTube हेराइहरू खरिद गर्दा मूल्याङ्कन गर्नका लागि यहाँ शीर्ष सुविधाहरू छन्:
मूल्या and्कन र समीक्षा - ग्राहकहरूले ब्रान्डको बारेमा के भन्नुहुन्छ खरीद निर्णयहरू गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। डिजिटल युगमा, उपभोक्ताहरूले कम्पनीसँग संलग्न हुने निर्णय गर्नु अघि6देखि 11 समीक्षाहरू पढ्छन्। ट्रस्टपाइलट जस्ता तेस्रो-पक्ष साइटहरूमा YouTube भ्युज बिक्रेतासँग राम्रो समीक्षा र मूल्याङ्कनहरू छन् कि छैनन् भनी जाँच गर्नुहोस्।
Trustpilot एक विश्वसनीय ग्राहक समीक्षा व्यवस्थापन साइट हो जसले ग्राहकहरूबाट व्यवसायहरूको वास्तविक समीक्षाहरू प्रदान गर्दछ। 4.5 भन्दा माथिको Trustpilot रेटिंग खोज्नुहोस् जसले कम्पनी विश्वसनीय छ भनेर संकेत गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, YTPal को Trustpilot मा 4.7 को मूल्याङ्कन छ र हेराइ, लाइक, सदस्यहरू, र अधिक खरीद गर्नको लागि उत्तम, वैध साइट मानिन्छ।
योजना - YouTube भ्यु प्रदायकको योजना र प्याकेजहरूको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। यदि तपाइँ सीमित बजेटको साथ शुरुवातकर्ता हुनुहुन्छ भने, साइटले निःशुल्क YouTube भ्यूहरू र सदस्यहरू सहित नि:शुल्क YouTube स्टार्टर प्याक प्रदान गर्दछ कि भनेर जाँच गर्नुहोस्। YTPal ले YouTubers को लागि नि:शुल्क स्टार्टर प्याक प्रदान गर्दछ जसले तपाईंलाई बाह्र घण्टामा दस सदस्यहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
नि:शुल्क प्याकेजको लागि छनौट गर्नु भनेको उत्पादन र सेवाहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्ने उत्कृष्ट तरिका हो जुन साइटले तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध गर्नु अघि प्रदान गर्दछ। एकचोटि तपाईं डेलिभरीको गति, प्रतिक्रियाशीलता, र सेवाको गुणस्तरसँग सन्तुष्ट भएपछि, तपाईं अन्य योजनाहरू खरिद गर्न जान सक्नुहुन्छ।
अन्य आकर्षक भुक्तान योजना प्याकेजहरू प्रति महिना $ 20 को रूपमा कम सुरु हुन्छ। तपाईंसँग 1000 भ्यू वा 100,000 भ्यूहरू ग्यारेन्टी गरिएको भुक्तान योजनाहरू छनौट गर्ने विकल्प छ।
यदि तपाइँ सम्पूर्ण चाहानुहुन्छ YouTube प्याकेज जसमा लाइक, सेयर, सब्सक्राइबर, र भ्युजका साथ कमेन्टहरू समावेश हुन्छन्, भ्युज प्याकेजहरू रोज्नु राम्रो हुन्छ। उदाहरणका लागि, 1000 भ्युज प्याकेजमा 50 लाईक, 100 सेयर र 10 कमेन्टहरू समावेश छन्। 5000 भ्युज प्याकेजमा तपाईले 400 लाईक, 2000 सेयर र 50 कमेन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले चाहेको भ्यु, लाइक, कमेन्ट र सेयरहरूको सङ्ख्या प्राप्त गर्दा पैसा बचत गर्ने एउटा YouTube भ्यु प्याकेज खरिद गर्नु उत्तम तरिका हो।
सेवाहरूको दायरा - २०२२ मा भ्यूहरू किन्नको लागि उत्तम साइट खोज्दा, प्रदायकले सेवाहरूको दायरा प्रदान गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गर्ने मुख्य कारक हो। तपाईंलाई YouTube भ्युहरू आवश्यक पर्न सक्छ, सुरुमा, तपाईं प्रगति गर्दै जाँदा, तपाईंलाई धेरै सेवाहरू चाहिन्छ, सहित
YouTube च्यानल मूल्यांकन
यूट्यूब भिडियो एसईओ
YouTube ग्राफिक डिजाइन
लाइक र सेयर गर्नुहोस्।
तपाइँ तपाइँको सोशल मिडिया उपस्थितिलाई अन्य च्यानलहरू जस्तै Twitter, Instagram, Twitch, वा Pinterest मा विस्तार गर्न चाहन सक्नुहुन्छ। यी प्रत्येक सेवाहरूको लागि धेरै साइटहरूमा पुग्नुको सट्टा, यी सबै सेवाहरू एउटै छानामुनि प्रस्ताव गर्ने साइट छनौट गर्नु राम्रो विचार हो।
वास्तविक विचार र अनुयायीहरू - तपाईंले हेराइहरू खरीद गर्दा ध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू मध्ये एक प्रामाणिकतासँग सम्बन्धित छ। त्यहाँ धेरै साइटहरू छन् जसले बटहरू र नक्कली अनुयायीहरू वा तपाईंको YouTube तथ्याङ्कहरू बढाउनको लागि दृश्यहरू प्रस्ताव गर्छन्। YouTube सफ्टवेयर, तथापि, यी नक्कली फलोअरहरू र बटहरू पत्ता लगाउन र मेटाउन डिजाइन गरिएको हो।
प्रिमियम सेवाहरू प्रदान गर्ने विश्वसनीय साइटले वास्तविक व्यक्तिहरूबाट YouTube लाई मनपर्ने, हेराइहरू र अनुकूलन टिप्पणीहरू प्रस्ताव गर्नेछ।
सुरक्षा र गोपनीयता - YouTube दृश्यहरू बेच्ने साइटमा हेर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू मध्ये एक हो कि तिनीहरूले गोपनीयता कायम राख्छन्। तिनीहरूको वेबसाइटमा साइटको गोपनीयता नीति मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र तिनीहरूले कसरी निजी जानकारी सङ्कलन र प्रयोग गर्छन्। उपयुक्त डाटा सङ्कलन, प्रशोधन, र भण्डारण अभ्यासहरू अपनाउने क्रममा आदर्श साइटले तपाईंको पासवर्ड माग्ने छैन। तिनीहरूसँग अनाधिकृत पहुँच वा खुलासा विरुद्ध तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी र लेनदेन डेटा सुरक्षित गर्न कडा सुरक्षा उपायहरू पनि हुनुपर्छ।
वेबसाइटले एन्क्रिप्टेड SSL सुरक्षित संचार प्लेटफर्म प्रयोग गर्दछ भने पनि उल्लेख गर्नुपर्छ।
रिफिल ग्यारेन्टी – रिफिल ग्यारेन्टी २०२२ मा YouTube भ्यूहरू खरिद गर्दा हेर्नको लागि महत्त्वपूर्ण कुराहरू मध्ये एक हो। यो महत्त्वपूर्ण छ किनभने तपाईंले खरिद गर्नुभएको भ्यूको सङ्ख्या प्राप्त गर्दा पनि विभिन्न कारणहरूले YouTube मा गणना घट्न सक्छ। आदर्श YouTube भ्यू प्रदायकले तपाइँसँग नि:शुल्क हेराइको सही संख्या छ भनी सुनिश्चित गर्न रिफिल ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ।
वितरण गति - जब तपाइँ YouTube दृश्यहरू खरीद गर्नुहुन्छ, तपाइँ स्वाभाविक रूपमा छिटो डेलिभरीको अपेक्षा गर्नुहुन्छ, जसले तपाइँलाई छिटो परिणाम दिन्छ। २०२२ मा YouTube भ्यूहरू किन्नको लागि उत्तम साइट छनोट गर्दा भ्यूहरू डेलिभर गर्नको लागि तिनीहरूको टर्नअराउन्ड समय थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। एक राम्रो प्रदायकले 2022 घण्टा भित्र डेलिभरी सुरु गर्नेछ र लक्षित दृश्यहरू डेलिभर नभएसम्म हरेक दिन जारी रहनेछ। शीर्ष साइटहरूले सामान्यतया केही दिन भित्र हेराइहरू प्रदान गर्नेछन्। यदि शंका छ भने, YouTube हेराइहरूको लागि टर्नअराउंड समय पुष्टि गर्न ग्राहक समर्थन टोलीसँग कुरा गर्नुहोस्।
YTPal जस्ता विश्वसनीय साइटहरूले थप सुरक्षाको लागि 100 प्रतिशत ग्यारेन्टी डेलिभरी र पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ।
अर्डर गर्ने अनुभव - किनमेल अनुभवले साइट भ्रमण गर्नेदेखि खरिद पूरा गर्नसम्म पसलमा संलग्न हुने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई जनाउँछ। YouTube भ्युज बिक्रेता साइट नेभिगेट गर्न सजिलो, अव्यवस्थित र व्यवस्थित हुनुपर्छ। तपाईले धेरै लिङ्कहरूमा क्लिक नगरीकन वा खरीद बटनको खोजी नगरी छिटो अर्डर गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। एक साधारण दर्ता प्रक्रियाबाट सुरु गर्दै, YouTube भ्यूहरू ब्राउज गर्दै चेक आउट गर्ने योजनाहरू छन्, सबै कुरा झन्झटमुक्त र द्रुत हुनुपर्छ।
ग्राहक समर्थन - एक आत्म-व्याख्यात्मक र प्रयोगकर्ता-अनुकूल इन्टरफेस बाहेक, आदर्श YouTube दृश्य विक्रेता साइटले व्यापक ग्राहक समर्थन प्रस्ताव गर्नेछ। यसमा एक समर्पित FAQ खण्ड समावेश हुन सक्छ जसले सबैभन्दा सामान्य प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ, ग्राहक सेवालाई सम्पर्क गर्नका लागि विभिन्न विकल्पहरू, जस्तै इमेल वा क्वेरी फारम।
एक उत्तरदायी कम्पनीले सामान्यतया 24 घण्टा भित्र वा 72 घण्टा भित्र तपाईलाई फिर्ता गर्नेछ।
फिर्ता नीति - प्रत्येक अन्य लेनदेनको रूपमा, साइटबाट हेराइहरू खरिद गर्दा सेवाहरू नपुगेको वा उत्पादन गुणस्तर मुद्दाहरू समावेश हुन सक्ने केही जोखिमहरू हुन सक्छ। हेराइहरू किन्नको लागि उत्तम साइटहरूमा स्पष्ट रूपमा शब्द फिर्ता नीति हुनेछ जुन कुन परिस्थितिमा फिर्ता जारी गर्न सकिन्छ र ग्राहकहरूले कसरी दावी गर्न सक्छन् भनेर निर्दिष्ट गर्दछ।
जब यो उत्पादनको गुणस्तरको कुरा आउँछ, धेरैजसो साइटहरूले तपाइँलाई प्रमाण प्रदान गर्न आवश्यक पर्दछ कि खरिद गरिएको सेवा साइटमा वर्णन अनुसार छैन।
यी बाहेक, तपाईंले साइटमा सदस्यता रद्द गर्ने नीति छ कि छैन भनेर पनि जाँच गर्न आवश्यक छ। यसले तपाइँलाई तपाइँको सदस्यता रद्द गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छ जब तपाइँ अब हेराइ वा सदस्यताहरू खरिद गर्न आवश्यक छैन।
उदाहरणका लागि, YTPals सँग सदस्यता रद्द गर्ने फिर्ती नीति छ जसले तपाईंलाई उत्पादन वा सेवासँग असन्तुष्ट भएमा सदस्यता रद्द गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंले सदस्यता भुक्तान मितिको सात दिन भित्र ग्राहक सेवामा सम्पर्क गरेर पूर्ण फिर्ता पाउन र आफ्नो सदस्यता रद्द गर्न सक्नुहुन्छ।
२०२२ मा आफ्नो YouTube रणनीतिलाई YouTube भ्यूको सहायताले बढाउनुहोस्
उच्च गुणस्तरको भिडियोहरू सिर्जना गर्नु भनेको अनुयायीहरूलाई आकर्षित गर्न र कायम राख्ने कुञ्जी हो। YouTube मा उच्च संतृप्ति र कडा प्रतिस्पर्धाको कारणले, शुरुवातकर्ताहरूलाई प्लेटफर्ममा अनुयायीहरू र हेराइहरू प्राप्त गर्न गाह्रो छ। यो कारण हो कि साइटहरू जहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ YouTube दृश्यहरू खरीद गर्नुहोस्, लाइक र सब्सक्राइबरहरू धेरै लोकप्रिय छन्। यदि तपाईं 2022 मा आफ्नो YouTube उपस्थिति बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने, YouTube भ्यू र फलोअरहरू किन्नको लागि उत्तम साइट छनौट गर्न माथि सूचीबद्ध चरणहरू अपनाउनुहोस्।
संक्षेपमा, २०२२ मा YouTube भ्यूहरू खरिद गर्ने प्रमाणित तरिका विक्रेताले प्रस्तावहरू सुनिश्चित गर्नु हो:
एक प्रिमियम गुणस्तर सेवा
अपग्रेड गर्न विकल्पहरूको साथ नि: शुल्क स्टार्टर प्याकेज
सेवा र योजनाहरूको फराकिलो दायरा
द्रुत वितरण र परिणामहरू
पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी र फिर्ती नीति
सजिलो, प्रयोगकर्ता-अनुकूल इन्टरफेस र जाँच प्रक्रिया
100 प्रतिशत सुरक्षा र गोपनीयता
उच्च गुणस्तर, प्रामाणिक YouTube दृश्यहरू
24 x7ग्राहक समर्थन
सकारात्मक समीक्षा र मूल्याङ्कन
उत्तम YouTube बिक्रेता साइटहरूले तपाईंलाई वास्तविक दृश्यहरू, अनुयायीहरू, र मनपर्नेहरू प्राप्त गरेर आफ्नो जैविक वृद्धि बढाउन सशक्त गर्दछ। YouTube भ्यू प्रदायकमा संलग्नता बढाउने कडा परिश्रम छोड्दा तपाईंलाई आफ्नो जोश र सामग्रीमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिनेछ।
हाम्रो ग्राहकहरु YTPal बारे के भनिरहेछन् हेर्नुहोस्
YouTube दृश्यहरू तपाईंको कार्टमा थपिएको छ।
Sub० सदस्य ($ २०) Sub० सदस्य ($ २०) Sub० सदस्य ($ २०) Sub० सदस्य ($ २०) Sub० सदस्य ($ २०) Sub० सदस्य ($ २०)
नयाँ YouTube सिर्जनाकर्ताहरूका लागि उत्कृष्ट क्यामेराहरू